Liverpool Oo Caddaadis Saartay City – Kadib Guusha Ay Ka Gaadhay Newcastle United
HomeEnglandLiverpool Oo Caddaadis Saartay City – Kadib Guusha Ay Ka Gaadhay Newcastle United
Liverpool ayaa afar dhibcood oo kaliya ay uga dhiman yihiin dhibcihii ay kaga mid noqon lahayd afarta naadi ee ugu sareeya Horyaalka England, ciyaar laba gool oo ay u kala saxeexeen xidigaha Raheem Sterling iyo Joe Allen ay kaga adkaatay oo ku khaarajisay Newcastle guushii shanaad oo xidhiidh ah.
Sterling, oo beryahanba xaaladiisu murugsanayd kadib markii uu diiday inuu qalinka ku duugo heshiis cusub ama mudo kordhin uu u sameeyo naadigiisa ayaa gool dhalinta ku furay kubad qurux badan oo uu difaaca dhexdiisa ka dhex laagay isla markaana gees kor ah ka toogtay oo daba mariyey goolwade Tim Krul.
Kooxda Newcastle ayaa laga diiday rigoodhe cadaan ah ka hor dhamaadka qaybtii hore ee ciyaarta, laakiin goolka uu qaybtii dambe u raaciyey Allen ayaa marmarsiinyo kasta oo ay rigoodhahaas ka dhigan lahaayeen meesha ka saaray.
Waxaa kaadhka casaanka ah dibada lagaga dhigay laacibka Newcastle ee Moussa Sissoko kadib markii uu si badheedh ah oo axmaqnimona hagayso luga ugaga istaagay ciyaaryahan Lucas.
Ciyaartiina waxay ku dhamaatay 2-0 ay guushu ku raacday naadiga Martida loogu ahaa Anfeild ee Liverpool oo imika kaalinta shanaad ku fadhida dhibco 57 ah.
Shanta Xiddig Ee Barca Oo Cabsi Geliyey Kooxaha Yurub
Yorke Oo Isku Wada Tababaraha Cusub ee Sunderland
Pele Oo Caafimaadkiisu Wanaagsan Yahay Qaliinkii Qanjidhka Kaadi Haysta Kadib